Dimy Mars fikarohana izay nanova ny fahatakarantsika ny planeta mena - News Fitsipika
Dimy Mars fikarohana izay nanova ny fahatakarantsika ny planeta mena
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Dimy Mars fikarohana izay nanova ny fahatakarantsika ny planeta mena” nosoratan'i Alan Yuhas in New York, fa theguardian.com ny alakamisy 5 Novambra 2015 21.15 UTC
Miaraka amin'ny Rover trundling ny tany mena, ny sambon-danitra amin'ny alalan'ny ny rivo-piainana antsitrika sy ny ekipa any am-piasana ny tany manodidina, Mars efa nahafoy ny zava-miafina tady ho NASA tamin'ny taon-dasa. Ireto ny sasany amin'ireo zavatra hitan'ny lehibe ny 2015.
Ranon-javatra ny rano ao amin'ny Mars
Nitady rehefa nandritra ny taona maro, porofo ny ranoka rano amin'ny Mars ara-bakiteny nivoaka avy tao amin'ny planeta tany Jolay, mihazakazaka midina hadilanana sy ny vava volkano rindrina vanim-potoana ny vanin-taona mafana. A NASA ekipa nahita hydrated sira, ny fifohana sigara ho an'ny rano basy rano, amin'ny toerana efatra izay maizina stains tsikelikely teo ny Martian lalana.
NASA dia tsy mbola mahalala ny loharanom-ny briny downhill fikorianan'ny, izay hitsangana avy ambanin'ny tany ranomandry na aquifers, na mampody avy amin'ny rivotra. Past asa fitoriana dia nahita hamantatra izany ny rano, anisan'izany ny sary ny zavatra niseho ho renirano kely ary na dia ny rano hampidina gullies, fa ny vanin-taona mafana nahitana dia nihoby ho porofo voalohany nanamafy ny ranon-javatra mifandray amin'ny fiainana indrindra.
Efa ela ny mpikaroka natao fa ny ranon-javatra ny rano no ilaina voalohany indrindra ny fiainana - NASA ny Mantra ao amin'ny fikatsahana dia ny "manaraka ny rano" - fa ny mpahay siansa ankehitriny ny olana miatrika ny fomba fanadihadiana ny renirano. Ny fitia ta hahalala izay efa nisafo Rover Mars nandritra ny telo taona dia tsy mamokatra, ary afaka contaminate ny lena faritra amin'ny an-tany bibikely izay nifikitra teo ny sambon-danitra amin'ny alalan'ny tontolo izao voarindra. Mety hanadihady ny Rover avy lavitra, miaraka amin'ny tamin'ny laser izay mandrefy ny vandana, na mety manatona ny Mahatondra vivery ny sasany fotaka.
Ny rivotra nendahany ny rivotra avy amin'ny masoandro
Ny Alakamisy, NASA dia nanambara andianà hitany momba Mars 'habakabaka izay afaka hanampy hamaha ny zava-miafina ny zava-nitranga tamin'i Mars, izay an'arivony tapitrisa taona lasa izay dia nisy lena, mafana izao tontolo izao miaraka amin'ny rivo-piainana 100 fotoana matevina. Ankehitriny Mars maina, mamanala ka tototry ny taratra - dia izao tontolo izao raha tsy misy ny andriamby mahery saha manodidina ny tany ary miaro azy amin'ny fipoahana tamin'ny masoandro.
Hitany avy amin'ny NASA ny Maven sambon-danitra, izay tonga Mars Tamin'ny fararano farany teo mba hanao fanadihadiana ny manify rivo-piainana, dia manampy ny hamaha ny zava-miafina. Mission mpahay siansa nahita fa ny masoandro tafio-drivotra, izay fipoahana hery sy ny fanindrahindram ivelany, haka niala poti avy ny rivotra iainana ny Mars amin'ny iray tsy mampino ny tahan'ny.
"Tahaka ny halatra ny vola madinika vitsivitsy avy amin'ny vola misoratra anarana isan'andro, lasa manan-danja ny very mandeha ny fotoana,"Hoy Bruce Jakosky, Maven ny tena naman'ny Fiangonana. Solar oram-baratra dia fahita matetika sy mafy aloha ao amin'ny rafi-masoandro ny tantara, izay midika fa ny zava-nitranga tamin'ny masoandro mety ho nanana fiantraikany lehibe ho an'ny rano sy ny rivotra ny Mars.
Ny iraka ihany koa ny norefesiny ny firafitry ny Mars 'rivo-piainana ho an'ny fotoana voalohany satria ny Viking iraka 40 taona maro lasa izay, ary nahita saro-pantarina habetsahan'ny vovoka manomba ambonin'ny planeta. Ny mpikaroka soso-kevitra mety ho interplanetary vovoka - ny cosmic voa tavela amin'ny comets sy asteroids mamakivaky ny rafi-masoandro.
Tamin'ny volana Oktobra, NASA mpahay siansa nahita porofo ny farihy izay mety ho naharitra hatramin'ny 10,000 taona - mety ampy ho ela velona mba hampivelatra ao amin'ny faritra teo tontolo ny marivo renirano sy ny deltas. Analysis ny antsanga nampiseho ny mpahay siansa fa ny rano nikoriana, mitondra vatokely sy fasika nidina ho any amin'ny vava volkano goavana Gale. Ao amin'ny afovoan-vava volkano no misy ny tendrombohitra mijoalajoala atao hoe Tendrombohitra Sharp, mihitsy ny fanangonan-karena ny telo-kilaometatra ny antsanga sosona.
Ambanin'ny tany ny rano
Tamin'ny Aprily, ny fitia ta hahalala Rover hita porofo ny ranoka rano ambanin'ny ambonin'ny ny Mars, ary ao ny mari-pana ao amin'ny Gale vava volkano izay tsara ho an'ny rano fotsiny brine. Nanolo-kevitra ny zavatra hita fa tany dia mando Martian amin'ny rano izay afaka mijanona ranon-javatra noho ny sira, kalsioma perchlorate, izay mitandrina izany tsiranoka nidina ho any ny -70C.
Maven mpahay siansa ihany koa ny nahita fa ny masoandro rivotra miteraka ny mitovy amin'ny avaratra jiro manerana be swaths ny Mars, vokatry ny avo angovo poti-mampientam-po ny rivo-piainana iray niambina sahan'andriamby. Olona afaka mahita ny Martian-taratasy auroras fa mena, loko manga sy maitso ny hita maso ny hiakam-pahatezerana, nefa tsy mbola NASA no mahalala izay mety hijery ny jiro toy ny, satria ny jirika tsy ny fitaovana mba hahita azy ireo.
Auroras ihany koa ny milaza fa ny ankamaroan'ny Mars dia nasiany totohondry ny masoandro rivotra, mampindrana porofo ny hevitra hoe masoandro zava-nitranga nahatonga ny fahaverezan 'ny rivo-piainana manodidina ny planeta. Misy andriamby saha hitoetra ao amin'ny fizarana ny Mizarazara ho sosona nofon niparitaka manerana ny planeta, fa ny planeta tsy ampy ny eran-ampinga fa indray mandeha nisy.
23719	0 Alan Yuhas, Article, te hahafanta-javatra Rover, Mars, NASA, News, Science, Space
← Amazon Fire HD 10 famerenana: nanapaka ny ratsy manaporofo zorony iray lafo vidy fahadisoana Samsung Gear S2 famerenana: fahafito fotoana tsara vintana ho an'ny Koreana mafy ny smartwatch →